Yellow Spot Irish Whiskey | Whisky Irish
[isihloko isihlokwana =”Yellow Spot” title =”Whisky Irish”][irowu cols_nr =”2″][usayizi ikholomu =”8″]Thanda Green Spot, le 12 Unyaka Old Yellow Spot Single Embizeni Namanje Whisky yadalwa for eMitchells Newayini Abathengisi Babantu Kildare Street Dublin futhi wakhululwa kusukela distillery ku cask ukuba ebhodleleni eMitchells Isitolo.
Ngalezo zinsuku, whiskey emiphongolweni eMitchells’ emafektri eziboshiwe abangu yaphahlekwa nge endaweni kapende anombala ukhombise yobudala. Ngakho Blue, green, Amachashaza Yellow and Red kwakuhambelana nokuka 7, 10, 12futhi 15 iminyaka ngokulandelana.
Delivery bunqamuka ngo 1960 kodwa izindaba ezinkulu wukuthi Irish Distillers wazivusa le emangalisayo 12 Unyaka Old Embizeni Namanje whiskey eminyakeni yamuva. Ngaphezu kuye ngefaneleko mayelana 12 iminyaka e Bourbon futhi Sherry emiphongolweni, Yellow Spot ke eseqedile e Malaga Butts ukulinganisela Embizeni Namanje Nonga nge ubumnandi honeyed.
Futhi esikhathini esizayo?
Bengingeke nhlobo kummangaze ukuphinde abone Red Spot wenze reappearance ezinkulu eminyakeni ezayo!
[/ikholomu][usayizi ikholomu =”4″]
[irowu cols_nr =”2″]
Thenga Yellow Spot Irish Whiskey
[usayizi ikholomu =”8″]
Yellow Spot 12 Unyaka Old Single Embizeni Namanje Whisky Irish
Njengoba abantu abaningi bazi, Bengilokhu fan enkulu Green Spot ngoba kwase kuqala wadedelwa futhi eminyakeni ethile edlule. Kodwa-ke sekufika Yellow Spot okuyinto Spot Green esiye abaneminyaka iminyaka eyengeziwe ngaphambi kokuba aqede e Malaga emiphongolweni ukunikeza ubumnandi lovely mellow.
Yellow Spot cishe manje nogologo yami siqu ozithandayo sokuphuza ekhaya nizihlalele. Kungenzeka kabili Treble ngentengo ye-whiskey entry level ezifana Jameson, kodwa umfana kuwufanele ke! Thanda Green Spot, ukuthi likhiqizwa eziningi limited njalo ngonyaka, ngakho uyithenga uma ubona lapha.
[usayizi ikholomu =”6″]
Yellow Spot Irish Whiskey zokuhlolwa amanothi
Ikhala: Upelepele, spice clove nge Peaches noju kusukela Malaga.
Nambithani: ukuxuba Super afudumele, okuthandwa alube ngoju, apula isiponji caramel.
Qeda: Lovely sekugcineni eside nge ubumnandi ezomile kusukela Malaga.
Uma kwakudingeka ngidlule ngithathe omunye Whisky Irish ukugcina ekhaya yami kuyoba Spot Yellow. Kuyinto kahle ukuthi ngangithi njengoba incazelo amathathu Pooka Irish Whiskey. Kungase abiza kabili Inani Pooka Whisky Omunye noma ezimbili, kodwa umfana kuwufanele lona zonke uthola ngaphandle kubiza umhlaba. izinga Kasibili emihle inani ukusuka kakhulu kakhulu, ekhethekile Malaga cask eseqedile Single Embizeni Namanje Whisky Irish.
[/ikholomu][usayizi ikholomu =”6″]
Yellow Spot Irish Whiskey Iqiniso Ifayela
I gama le-brand: Spot Whisky
Igama: Yellow Spot
Isitatimende Ubudala: 12 Iminyaka
ehlungiwe?: hlala Non ehlungiwe
Uhlobo Whisky: Embizeni Namanje Whisky
Uhlobo Cask: Ex Bourbon Barrel, Sherry Butts futhi Malaga Butts
Pooka Scale: Three phezu Pooka isikali
Thola mayelana Pooka Scale
Whisky Suppliers yethu Irish
Konke “ukuthenga inthanethi” izixhumanisi IrishWhiskey.com akunike ithuba ukuthenga Yellow Spot Irish Whiskey Amazon, Whisky Exchange noma iNkosi Malt ngoba thina abaxhumana. Ngayinye yalezi nabathengisi elihle ngeke ke ukucubungula i-oda yakho futhi abakhulule Yellow Spot Single Embizeni Whisky yakho Namanje Irish kuwe ngqo ukujabulela. Stuart uthi – “uyojabulela”.
Distillers Irish zikhiqiza edume kunazo nabathandwayo umkhiqizo we-Irish Whiskey like Jameson, onesiqhova 10, Paddy, amandla, Wamabele Olubomvu Yellow Spot Whisky.